Horoscope Archives - Page2of5- Khit Style
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) နေ့ သားသမီးများအတွက် တပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၂၁.၆.၂၀) မှ (၂၇.၆.၂၀) ရက်နေ့အထိ..
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် (၂၁.၆.၂၀) မှ (၂၇.၆.၂၀) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းများ အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာရပ်အတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးများကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင် ကြပါစေ..။ Sir Min Thein Kha…
သင့် အသက် ဘယ်လောက် လဲ? ဘာ နေ့မွေးလဲ? သာ မှန်မှန် ပြောပါ မှန်လွန်း လို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ် တဲ့ ဇနက ဟောကိန်း
မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနက ဟောကိန်း… ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ် ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြား တွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။ အဟောကြည့်နည်း…. တနင်္ဂနွေ ဥပမာ – မိမိက တနင်္ဂနွေသားသမီး…
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) နေ့ သားသမီးများအတွက် တပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၇.၆.၂၀) မှ (၁၃.၆.၂၀) ရက်နေ့အထိ
Posted on June 7, 2020 August 8, 2020 by soeminnaing
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် (၇.၆.၂၀) မှ (၁၃.၆.၂၀) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းများ အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာရပ်အတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးများကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင် ကြပါစေ..။ Sir Min Thein Kha…
ယနေ့ (5.6.2020) လပြည့်နေ့တွင်သာ ပြုလုပ်ရမယ့် ကံပွင့်ကံမြင့် အကြံအစည် အလုပ်အကိုင် များအောင်မြင်စေမည့် ယတြာ
Posted on June 5, 2020 August 8, 2020 by soeminnaing
ကံံပွင့် ကံမြှင့်စေရန် လပြည့်နေ့ (5.6.2020)တွင်သာ ပြုလုပ်ရမယ့် ယတြာ နှင်းဆီပန်း(၅)ပွင့်၊ သပြေပန်း(၅)ခက်၊ လမုန့်(၅)ခုတို့အား လင်ဗန်းတစ်ချပ် ထဲတွင် လှပအောင်ပြင်ဆင်၍ ထည့်ပြီး ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် အမွေးတိုင်(၅)တိုင်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်စီကိုလည်း ဘုရားရှင် အား ဆက် ကပ် လှူဒါန်းပါ။ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးအား ရည်စူ းကပ်လှူ ပူဇော်ရင်း အောက်ပါ အတိုင်း လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းပေး ပါ။…
မိတ်ဆွေ များ အားလုံး အတွက် … ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ အ တွက် (၁) လစာ ဟောစာတမ်း
Posted on June 1, 2020 August 8, 2020 by soeminnaing
မိတ်ဆွေ များ အားလုံးအတွက် … ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွက် (၁) လစာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင် သည့် ကောင်းသော ဟောချက်များ မှန်က န်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင် သည့် မကောင်းသော ဟောချက်များ တက်တက် စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင်…
၂၀၂၀ (၆)လပို င်းမှစ၍ သင် ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်း ကို ဒါလေးဖတ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ
၂၀၂၀ (၆)လပို င်းမှစ၍ သင် ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်း ကို ဒါလေးဖတ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ (မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါအုံး) သင့် နာမည်၊ဂုဏ်သတင်း အောင်မြင်ကျော်ကြား ၊ကြီးပွား ဖို့ ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်နေပြီလား?သင့်မိတ်ဆွေကော? ဤလမ်းကြောင်း အားအောင်မြင်ရေး လမ်းကြောင်းဟုခေါ်ပြီး လက်သူကြွယ်၏ခြေရင်း တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခုံအပေါ်သို့ ထိုးတက်သွားသော လမ်းကြောင်း လည်းဖြစ်သည်။ ကံလမ်းကြောင်းလည်းကောင်းမွန်နေမည် ဆိုပါက သင့်အားဂုဏ် သတင်းကျော်ကြားခြင်း၊အောင်မြင်ကျော်ဇောခြင်းတို့ကို အာမခံချက်ပေး မည်ဖြစ်ပေ သည်။ ထိုလမ်းကြောင်း…
ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ့ (၇) သာသမီးမျာအတွက် မေလ 25 မှ ဇွန်လ7အထိ ဆယ့်ငါးရက်အတွင်း ကံကြမ္မာ၊ အဆိုးအကောင်းနှင့် ယတြာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်
ခုနှစ်နေ့ဖွား မိတ်ဆွေများအတွက် မေလ 25 မှ ဇွန်လ7အထိ ဆယ့်ငါးရက်အတွင်း ကံကြမ္မာ၊ အဆိုးအကောင်းနှင့် ယတြာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည် တနင်္ဂနွေနေ့ ဖွားများ မကြာခဏ ခရီးထွက်ရတတ်ပါသည် နိုင်ငံခြားသို့ထွက်ခွာရန် ကြိုးစားပါက ယခုအချိန်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် မိမိ၏မိသားစုအတွင်း အပြင်လူမှ ပြဿနာဖြစ်စေရန် အမျိုးမျိုးလှည့်စားခြင်းခံရတတ်ပါသည်။ ခြေလေးချောင်းသား အစားအစာများနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိ၏ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့စေလိမ့်မည် အစားမှား၊ ဆေးမှား ကြုံရစေတတ်ပါသည်။…
အဘမင်းသိင်္ခ ရဲ့ “ထီပေါက်ချင် သူတို့အတွက် ထီလမ်းညွှန်”
Posted on May 31, 2020 August 8, 2020 by soeminnaing
အဘမင်းသိင်္ခ ရဲ့ “ထီပေါက်ချင် သူတို့အတွက် ထီလမ်းညွှန်” “ထီပေါက်ချင် သူတို့ အတွက် ထီလမ်းညွှန်” မိတ်ဆွေတွေက ထီပေါက် ဖို့ ကံ ပါမပါ မေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဘမင်းသိင်္ခ ပြောသွားဖူး တာကတော့ ထီမထိုးတဲ့သူ ပေါက်ဖို့ကံ မရှိသလောက်ပဲတဲ့။ ထီထိုးထားရင်တော့ ပေါက်ဖို့ကံ တစ်ဝက်တော့ရှိနေပြီတဲ့..၊ အဲဒီတော့ ထီပေါက်ကိန်းရှိဖို့အတွက်ဆိုရင် ထီထိုးဖို့ကတော့ လိုကို လိုအပ်ပြီ ပေါ့ခင်ဗျာ …။ ထီထိုးတဲ့…
ယောကျာ်းလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် မိမိချစ်သူ ခင်မင်သူများကို မျက်ခုံးကြည့်ပြီး အကဲခတ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်း
(၁) မျက်ခုံး၂ခု နီးစပ်နေလျှင်ရဲစွမ်း သတ္တိ ပြည့်ဝ စေပြီး ၊ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ကောင်းသူဖြစ်လေသည်… (၂) မျက်ခုံး ထူနေလျှင်အလုပ်လုပ်ရာတွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စူးစူးစိုက်စိုက် လုပ်တက်ပါသည်… (၃) မျက်ခုံးနှစ်ခုသည် တခုနှင့် တခု ဝေးကွာနေလျှင်သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားသူ ဖြစ်ပါသည်…. (၄) မျက်ခုံးပါးလျှင် ဟိုဟာ အလိုမကျ ၊ဒီဟာ အလိုမကျ နှင့် ချေးများတက်သည်၊ ဇီဇာကြောင်သောသူ ဖြစ်ပါသည်……
Posted on May 29, 2020 August 8, 2020 by soeminnaing
တနငြျဂနှသေားသမီးမွားအတှကြ..၊ ဒီလထဲတှငကြှုံတှေ့နရသေောပှသနာမွားအားခွုပကြိုငအြနိုငယြူစှမြးရှိသောကာလဖှဈသညြ။မိမိလုပဆြောငသြမွှကိုအမွိုးသမီးတဈဦးမလိုကလြံကူညီတကသြညြ ။ စီးပှားရေး၊ အလုပအြကိုငနြှငြ့ပတြ သကပြှီး လူမွိုးခှား၊ နိုငငြံခှားနှငြ့ ပတသြကသြော လုပငြနြး၊ အထညအြလိပနြှငြ့ပတသြကသြော လုပငြနြး၊ ဟိုတယနြှငြ့ခရီးသှား လုပငြနြး၊ ပှညပြနှငြ့ပတသြကသြော လုပငြနြးမွား အဆငပြှအေောငမြှငကြိနြး ရှိပါသညြ ။ ငှရေေး၊ ကှေးရေး ကံမကောငြးသေးပါ။ ငှအထှေကမြွားခှငြး၊ ရစရာရှိတာမရခှငြး၊ ပေးစရာရှိတာ မပေးဖှဈသေး ခှငြး၊ အကှှေးတငခြှငြးမွား ကှုံရကိနြးရှိပါသညြ။ အလုပအြကိုငပြှောငြးရှှေ့ခငွြ စိတမြွားဖှဈနတတေပြါသညြ ။…